Vaovao - Inona no fomba tsara indrindra anaovana satroka fisaka
Lalàna fa zazavavy maro no tia ny satroka fisaka, satria amin'ny fanaovana azy io, na dia olon-tsotra ianao, dia hatao hoe "fashionista". Ny fanontaniana mipetraka dia hoe, inona no fomba tsara indrindra anaovana akanjo fisaka mba ho tsara tarehy?
Inona avy ireo satroka volom-borona? Inona no endrika endrika mety hanaovana akanjo?
Ho an'ny zazavavy, izay te-hitafy akanjo mahazatra, dia afaka misafidy satroka miloko marevaka miloko mafana ianao, ary rehefa anaovanao azy ireo dia ho tsotra sy mamy amin'ny fomba maotina kokoa izy ireo.
Ho an'ny zazavavy manana toetra manokana dia afaka misafidy satroka somotra volo miaraka amina graffiti namboarina ianao, ary afaka misafidy karazana endrika famolavolana malalaka ianao, ary rehefa mitafy azy ireo ianao dia afaka miankina amin'ny làlan'ny 30 degre, ka hitovy amin'ny Be maharaka avy hatrany.
Ny tovovavy tia akanjo tsy miandany dia afaka misafidy satroka somotra volo miaraka amin'ny maitso sy rameva an'ny tafika ho toy ny loko lehibe, mba hahatonga ny akanjo tsy miandany hanana lamaody kokoa. Sarin'ny fomba fanaovana satroka fisaka.
Ny mampiavaka ny satroka fisaka volo dia feno kokoa izy io. Rehefa tonta dia hahatonga ny tarehy iray manontolo ho simetrika kokoa. Raha manao satroka tanteraka ianao, dia hiseho ny faritra ambony amin'ny loha, somary avo kokoa ny ankamaroan'izy ireo, izany hoe, eo afovoan'ny handrina na eo amin'ny toerana avo kokoa, dia manaova satroka fisaka ao ambadiky ny loha ny lamosin'ny loha. Aza mitafy azy milamina sy milamina.
Ho fanampin'izay, ny satroka feno volo dia azo hanaovana tsy jerena ny eo aloha, ny lamosina, ny ilany ary ny mivadika. Ny vokany ankapobeny sy ny vokany any amin'ny lalana rehetra dia tsara kokoa noho ny sisiny miolaka.
Inona no endrika bikan'ny akanjo vita amin'ny fisaka
Ny satroka lava volo dia tsy dia mifantina loatra, noho izany mora ny milalao taovolo tsotra, ary tsy maintsy miolakolaka kely. Ny akanjo dia manondro kojakoja izay ampiasaina hifanaraka amin'ny akanjo. Ahitana satroka, kiraro, fehiloha, fonon-tànana ary zavatra hafa indrindra.
Fotoana fandefasana: Jul-27-2020